Soo dejisan Onavo Count 2.7.2 – Vessoft
AndroidShabakadKormeerka & FalanqayntaOnavo Count
Bogga rasmiga ah: Onavo Count
Onavo Tiri – software ah si ay ula socdaan oo la xakameeyo isticmaalka nooc kasta oo ka mid ah xogta mobile. software The lafaguraa iyo bandhigayaa xaddiga gaadiidka by codsiyada kala duwan loo isticmaalo muddo waqti go’an. Tirada Onavo kuu ogolaanayaa inaad dhigay xad ku saabsan isticmaalka gaadiidka iyo quful ah in ay internet-ka ee codsiyada gaar ah. software soo bandhigayaa tirakoobyada ee isticmaalka xogta qalab ee qaybaha kala duwan. Tirada Onavo bixisaa duwanaansho ugu fiicnayn of xirmo canshuur ku salaysan ururinta xogta loo isticmaalo.
Falanqaynta of gaadiidka la isticmaalay
Bandhigay dhaqdhaqaaqa internetka
qaabeynta Easy ee xadka iyo bixinta muddo bil
Ogeysiinta Isticmaalka gaadiidka by codsiyada kale ee
Soo dejisan Onavo Count
Faallo ku saabsan Onavo Count
Onavo Count Xirfadaha la xiriira